Pfsense firewall အကြောင်း
Pfsense firewall အကြောင်း
Thread: Pfsense firewall အကြောင်း
04-11-2014 12:02 PM #1
မင်္ဂလာပါ...myanmar engineer မှာရှိတဲ့အကိုအမတို့အားလုံး..နှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ....ကျွန်တော်အစတခုဆွဲထုတ်ချင်လို့ပါ..အခုနောက်ပိုင်းအသုံးများနေတဲ့(Pfsense Firewall )အကြောင်းအသေးစိတ်သိချင်လို့ပါ..သိတဲ့အကိုအမများရှိရင်လည်းဝိုင်းပြီးပြောပြပေးပါ...
The Following User Says Thank You to jupitar For This Useful Post:
04-11-2014 11:47 PM #2
Thanked 3,240 Times in 881 Posts
pfSense Firewall အကြောင်းး အသေးစိတ်ကို အောက်ကလင့်မှာ ရေးထားပါတယ်။
The Following User Says Thank You to phoelapyae For This Useful Post:
07-24-2014 12:57 PM #3
10-17-2014 12:31 PM #4
ကျွန်တော်က အခုမှ စမ်းတာပါ pfsense ကို။ pfsense မှာ client တွေက internet connection မရလို့ဖြစ်နေတယ် အကို့တို့ ။ အကိုတို့ အဆင်ပြေရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ရှင်းပြပေးပါအုံး။ကျွန်တော် pfsense ကို မသိတာတွေများနေလို့ပါ။ Please။
The Following User Says Thank You to မင်းမုန်းတဲ့ဒဿ For This Useful Post:
10-19-2014 05:07 PM #5
pFsense Server ကိုယ်တိုင် အင်တာနက် ရမရ အရင် စမ်းကြည့်ပါ။
ရတယ်ဆိုရင်တော့ client က NAT နဲ့ အင်တာနက် ရနေမှာပါ။
IP တွေ မှန်/မမှန် စစ်ကြည့်ပါ။
default setting မှာတင် client က အင်တာနက် ရနေပါလိမ့်မယ်။
လုပ်ကြည့်ပြီး တွေ့တဲ့ အယ်ရာကို ပြောပေးပါလား။
ဒါမှ မှားနေတာကို ပြောပြလို့ ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီအတိုင်းက ခန့်မှန်းခြေပဲ ရှိမှာပါ
The Following2Users Say Thank You to phoelapyae For This Useful Post:
usser, William Paul
10-20-2014 01:02 PM #6
ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကိုဖိုးလပြည့် လုပ်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်...ကျေးဇူးပါ
10-20-2014 01:25 PM #7
အစ်ကို ဖိုးလပြည့် ကျေးဇူးပါ ရသွားပါပြီ။နောက်ထပ်အကြံပြုချင်တာရှိသေးတယ်ဗျ...:P အစ်ကိုအားရင် pfsense ထဲမှာ configuration လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးတွေ ရေးတင်ပေးပါလား။အစ်ကိုဒီထက်မက အောင်မြင်နိင်ပါစေ ဒီထက်မက သိနိုင်ပါစေ ဂုဏ်ယူစွာဆုတောင်းပေးတယ်ဗျာ။ကျေးဇူးအစ်ကို။
10-22-2014 09:33 AM #8
pFsense Configuration ကို Thant Zin Soe ရေးထားတဲ့စာအုပ်မှာ တော်တော်စုံစုံလင်လင်ရှိလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ကြည့်လို့ အဆင်မပြေတာရှိရင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
Credit to : http://www.thantzinsoe.co.nr/
The Following4Users Say Thank You to phoelapyae For This Useful Post:
myatheinthu.mm, usser, William Paul, ချင်းတွင်းသား
10-24-2014 01:50 PM #9
03-07-2018 08:30 AM #10
Kyaw Myo Oo
Thanks for sharing@@
Quick Navigation ကွန်ယက်အင်ဂျင်နီယာပညာ Top
All times are GMT +6.5. The time now is 09:49 PM.